Mataurirwo aHaile Selassie kuAU muna 1963 na 64 - AFRIKHEPRI
Hurukuro Haile Sélassié kuAU mu 1963 uye 64
Ginseng - Mushonga chete wepanyama unokwanisa kurapa marwere ese
Chitatu, Chivabvu 27, 2020
kugashira MHURI WEVADZIDZI VEMBA
IMakore mashoma apfuura, kubudirira kwakabudirira pane ino kondinendi. Idzi dzaisave dzakaderera pane iya yaivepo kune mamwe makondinendi. VaAfrica vaive vakasununguka mune zvematongerwo enyika uye vakazvimirira. Ivo vaive nemaitiro avo ezvemagariro, uye tsika dzadzo dzaive dzechivanhu chaiko. Iyo nguva yekoloni yakaguma necheni uye kuiswa muuranda hwenyika yedu. Vanhu vedu vaimbozvishingisa uye vakasununguka vanhu vakaitwa varanda uye vakanyadziswa. Nhasi, Africa yabuda panguva ino yerima.
Ichangobva kuzvarwa patsva seAfrica yakasununguka, uye veAfrica sevanhu vakasununguka. Ropa rakateurirwa uye kutambudzika kunowanikwa kune zvikonzero zvakanakisisa zvekusununguka nekubatana kwedu. Hazvina mhosva kuti tinosangana neiko, zvine ruremekedzo kuti tichayeuka avo vose veAfrica avo vakaramba kubvuma kutongwa kwakaitwa kwavari nevakuru vekoloni uye vanyengeri, veavo vose vaiva netariro, vasina kuparara, nguva dzakaoma zvikuru, muAfrica dzakasunungura kubva mune zvematongerwo enyika, zvehupfumi uye zvehutano hwemweya.
Vakawanda vavo havana kumbotsika pasi rino. Vamwe, pane zvinopesana, vakazvarwa imomo ndokufira ipapo. Tiri pano kuti tive nechinangwa chekubatana kweAfrica. Naizvozvo, isu uye nhasi, tinofanira kubvumirana pamusoro pechimbo chekutanga chichava nheyo yekuvandudzika kwekondinendi ino mune rugare, kubatana nekubatana. (...)
Musangano uyu haugone kupera pasina kubvumirwa kweChirungu chimwe cheAfrica. Kana tikazvibvumira kutungamirirwa nekunetseka kwechido chakanyanya uye chido chisina maturo, kana tikashandurudza zvatinotenda nekuda kwenguva pfupi kubatsirwa, ndiani achamutenda mazwi edu, ndiani achamutenda mukusafarira kwedu? Tinofanira kuita kuti tizive maonero edu, pamatambudziko makuru anotarisa nyika, nekushinga nekuvimbika, nokutaura kuti chii. (...)
Zviito zvedu nemafungiro hazvifaniri kutongororwa. Ngatitenderane nezvatinotenda kuitira kuti vashumire isu uye vatikudza. (...)
Isu tinonyanya kuzvipira kubvisa zvachose kusarurwa kwechisarudzo kune kondinendi yedu. (...) Kusarura kwechisarura ndiko kupesana kukuru kwehutano hwepfungwa nehumweya hwatakatamburira kuti tibudirire. Izvo zvakare kukanganisa humwe uye chiremera cheAfrica chatakagadza kuburikidza nematambudziko edu. Kuyeuka kusaruramisira kwakapfuura hakufaniri kutitadzisa kuona nhamo dzinokurumidza kutarisana nesu. Tinofanira kurarama murugare nevekare vekare. Ngatitange kusununguka pakuzvitsanangurira nekurwadziwa. Rambai kusakoshi kwekutsiva uye kutsiva. Ngatibvisei manzwiro ose eruvengo anogona kungoparadza mweya yedu uye chepfu
mwoyo yedu. Ngatitore sekufananidzira chiremera chatinozviti isu seAfrica, tinozvikudza pamusoro pehupenyu hwedu, kusiyana kwedu uye mano edu. Tinoziva kune kusiyana pakati pedu. Vanhu veAfrica vane tsika dzakasiyana, eigenvalues, zviito zvakasiyana. Asi isu tinozivawo, uye pano tine mienzaniso, kuti kubatana kunogona kuwanikwa pakati pevarume vemarudzi akasiyana-siyana, kuti kusiyana kwerudzi, chitendero, tsika, tsika, hazviiti zvipingamupinyi zvisingakwanisi kubatana kwevanhu.
Nhoroondo inotidzidzisa kuti kubatana isimba uye inotikurudzira kuti tisiyane nemafungiro edu, kuvakunda, mukutsvaga zvinangwa zvakafanana, kurwisana nemasimba edu akabatana, munzira yehukama hwechokwadi nekubatana. African. Zvatinoda isangano rimwe chete reAfrica iro Africa inogona kutaura nenzwi rimwe. Tinoratidza tariro yokuti tichava neuchenjeri, kutonga nekufuridzirwa kuchengetedza kuvimba kwevanhu vedu uye nyika dzakagadza matambudziko avo mumaoko edu. "
“Kurangwa kwepfungwa ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvetsika chaiyo, uye, Saka, yesimba remweya. Chokwadi, yunivhesiti, inotorwa muzvinhu zvayo zvese, iri, bhizinesi rezvekunamata iro, kunze kwekuziva uye nekudzidziswa kwarinotungamira, rinotungamira vadzidzi kuupenyu hwehungwaru uye vanoziva zvakanyanya mabasa . Tine chivimbo chekuti masangano aya, ayo anoumba yunivhesiti iyi, achawedzerwa nekuvandudzwa, kuitira kuti huwandu hwevashandi veEtiopiya vane hunyanzvi varambe vachiwedzera. "
Simba reMitemo "Hapana munhu anogona kukanganwa kukosha kwomweya mumamiriro ezvinhu ekudzidza. Mirayiridzo uye kudzidziswa kwehuchenjeri zvinofanira kusimbiswa nokutenda muna Mwari, kuremekedza kwevanhu uye kuremekedza kwekufunga kwepfungwa. Hapana huno nechokwadi kuti tinodzidziswa, hupenyu hwedu, uye zviito zvedu zvevanhu, uye izvi zvinofanirwa kunge zvakabatanidzwa nekudzidzisa kwaMwari uye zvakanakisisa pakunzwisisa munhu.
Utungamiri basa rakagadzirwa apa rakafuridzirwa nemitemo yepamusoro uye simba rehutsika iro rave riri chirevo chedziso dzedu dzechitendero kwemazana emakore. Nguva yedu inguva yakaoma umo marudzi anomuka achipikisana nemarudzi. Kurwisana kunowedzera uye njodzi inogoneka chero nguva. Nharaunda dzinopfupiswa. Runyararo nehupenyu zvinotyisidzirwa nekupesana nekusazwisisa. Iko nguva yakakwirira nhasi kuti kutenda kwakatendeseka muukama hwevanhu naMwari ndiyo nheyo yebasa rose revanhu pakuvaka kwake uye kudzidzisa, hwaro hwekunzwisisa kwose, kubatana uye rugare. "
Kutaura kweHaile Selassie 1er, ye4 oct 1964
"Chero bedzi firipi, iyo inofunga kuti rumwe rudzi rwakakwirira uye imwe yakashata, haigoni kurambidzwa zvachose nekusiyiwa. Chero bedzi apo kune vekutanga uye yechipiri kirasi munharaunda. Chero bedzi ruvara rweganda rwemunhu ruchava nehuwandu huzhinji, kupfuura rwemeso ake. Chero kwenguva refu sekodzero dzevanhu, hazvizovimbiswi zvakaenzana kune munhu wose pasinei nemasikirwo. Chero bedzi zuva ranhasi risati rasvika, kurota kworugare rwekugara, hwekugara kwenyika yose uye kutonga kwemitemo yenyika dzakawanda, kuchagara kungofungidzira zvisiri izvo, zvinotsvakwa asi hazvina kumboitika. Uye chero bedzi hurumende dzakaipa dzakafuridzirwa uye dzinonyadzisa dzinobata hama dzedu dzeAfrica mumaketani asingasviki hazvizogoni kuparadzwa uye kuparadzwa. Chero bedzi kusarurana, kusarura uye zvido zvevanhu, hazvina kuchinjwa nekunzwisisa kushivirira nekufarirwa. Chero bedzi hama dzeAfrica dzisingasimiri uye dzisingatauri sevanhu vakaenzana mumaziso evanhu vose sezvavari kudenga; Chero bedzi zuva rino risina kusvika, vanhu havazozivi rugare. Isu veAfrica ticharwa kana zvichidiwa uye tinoziva kuti tichakunda, nokuti tinovimba mukukunda kwezvakanaka pane zvakaipa. Chikonzero chekusarurwa kwemadzinza uye kukoloniya nguva dzose chave chiri chepfumi uye ine zvombo zvemari zvatichakwanisa kukunda. Somugumisiro wezvisarudzo zvakagamuchirwa mumusangano wekupomerwa kweAdis Ababa, nyika dzeAfrica dzakatora matanho akawanda ehupfumi, ayo, kana akagamuchirwa nehurumende dzose dzeUnited States, aizokurumidza kuchinja kusagadzikana kwakakodzera. Ndinobvunza nhasi kuti nyika imwe neimwe inomiririrwa inonyatsozvipira kumitemo inoratidzwa mubumbiro uye inotevedzera izvi. Tinofanira kuita chero kwenguva yakareba. Chero bedzi pane mukana wekushandisa zvinetso izvi zvinotyisa kuti kutya kuti nguva ichasvika uye ichatikurudzira kuti tishandise kune nzira shoma shoma. Muzviitiko zvemazuva ano marudzi makuru enyika ino angaita zvakanaka kukurangarira kuti kunyange ivo pachavo pachavo havakwanisi zvachose mumaoko avo. Runyararo runokumbira kubatana kwakabatana kweumwe nomumwe wedu. Ndiani anogona kufanotaura kuti chii chinogona kupisa pfupfu? Kune isu tose dambudziko ndiro rimwechete, upenyu kana rufu, isu tose tinoda kurarama, isu tose tinotsvaka, nyika umo varume vangasunungurwa pamitoro yekusaziva, urombo, nzara uye kana dambudziko racho raizoitika, isu tose tichakurumidza kupukunyuka mvura inouraya yenyukireya. Matambudziko atinotarisana nawo nhasi ose akaenzana, asina kumboitika. Havana kana mumwe muhupenyu hwevanhu. Varume vanotsvaka zviitiko uye zvinogadziriswa mumapeji ehupfumi, asi hapana. Ichi ndicho chinetso chikuru. Tichaenda kupi kutarisa kupona kwedu? Ndekupi kwatinoenda kutarisa mhinduro dzemibvunzo isina kumbobvunzwa. Ichi ndicho chinetso chikuru. Tichawana kupi mhinduro dzemibvunzo isina kumbobvunzwa? Tinofanira kutanga tishandura kuna Mwari wemasimba ose, uyo akamutsa munhu pamusoro pemhuka uye akamupa nekuchenjera uye kufunga, tinofanira kuva nokutenda maari, kuti haazoiti musarega uye musatibvumira kuti tiparadze hupenyu hwaakasika mumufananidzo wake. Uye isu tinofanira kutarisa mukati medu kunyange mumvura yakadzama yemweya yedu. Tinofanira kuva izvo zvatisati tambove, izvo zvidzidzo zvedu, ruzivo rwedu uye zvakatipoteredza, hatina kunyatsogadzirira. Tinofanirwa kuva vakuru kune isu, tine ushingi, tine pfungwa yakawanda, yakawanda yakajeka. Tinofanira kuva rutsva rutsva, kukunda kusarura kwedu kusina basa uye kuzviisa pasi pechivimbo chekupedzisira chatinacho tisingaiti kune mamwe marudzi asi kune vamwe vedu munharaunda yevanhu. »
Mambo Wekupedzisira weMadzimambo: Haïlé Sélassié's Itiopiya
5 nyowani kubva ku € 38,00
2 yakashandiswa kubva € 37,99
kubvira waMay 27, 2020 8:17
Part Number 9782738427571
Is Adult Chigadzirwa
Mutungamiri weChechi, Panafricanism & Democracy
Hurukuro naNelson Mandela (1994)
Sandrine Ngalula Mubenga, mugadziki wemotokari yebrbrid